Ny fahantrana ao filipina - Ny mpisolovava ny Philippines! Filipiana mpisolovava, an-tserasera rehetra.
Ny fahantrana ao filipina
Ireo ankizy miasa amin'ny arabe no tratran'ny loza maro
ny iray amin'ireo olana lehibe ny firenena Ny izany dia ny ankamaroany vehivavy Mitondra ny be loatra ny olana dia efa izy ho valin ny Filipiana mba hiatrehana ny isan'andro ny fiainana
'Ny teny mpifanolo-bodirindrina aminy ao an-usa' dia lazaina eto.
Ny antony ny famoahana ao amin'ny tanindrazana sy ny ho tafasaraka amin'ny fianakavianao dia tsy mora ho an'ny kolontsaina isika nihalehibe. Ireto misy antony lehibe ny fahantrana ao Filipina: Ity no mafy indrindra ary matsilo mahatonga ny fijaliana an-tanàna.
Ny vola ho an'ny fanantenana amin'ny an 'ny fiadanan' ny olona fotsiny dia ny hoe mandeha an-paosin'ny ny vitsivitsy izay manana fahefana ao amin'ny governemanta.
Izany dia heverina ho toy ny homamiadana ao amin'ny fiaraha-monina. IMPERIALISMO: ny fanafihana Ny firenena maro ao amin'ny vanim-potoana teo aloha toy ny any Espaina, Japana sy ETAZONIA nampijaliana ao Filipina.
Vahiny ihany koa hiala ny ratsy na ratsy ny fitarihana sy ny kolontsaina ao amin'ny firenena.
Ny mbola an-tsehatra na ny bitsiky ny ETAZONIA tamin'ny maty Filipina. Milaza ny fanampiana ara-bola ny firenena matanjaka ao Filipina, ny kolikoly, ny rotate sy madiktahan ny governemanta. Ny vola izay tsy voatery mandeha miaraka amin'ny marina ny tetikasa, fa lavo koa ny any am-paosin'ny ny fanontaniana. Vola tsolotra mba hampitombo ny tanjona manokana mba nagbabaon ny fahantrana ao Filipina. Ny fampidirana 'fanatontoloana' maitutuiring koa ny imperialisma.
Izay ny vahiny sy ny mpanan-karena kapitalista izay manana orinasa isan-karazany dia nanosika ny governemanta siskilin ny zon'ny mangaggawa.
Ary ny fiaraha-mitantana ny filaminana maty sy ny kapitalista dia nanorotoro ny sendika fa ny mamono ny marina ny mpamokatra mba manana araka ny tokony ho karama, ny soa sy ny rariny. Heverina ho toy ny fanandevozana na 'fanandevozana' ny karama farany ireo mpiasa, raha ampitahaina amin'ny fidiram-bola ny goavam-be ny orinasa vahiny. Ny antony faharoa dia ny fitondran-tena ny mpitondra ny firenena, ny pagbubulsa ao anatin'ny sambo-fiara ao an-tanàna. Ny vola ho an'ny fampandrosoana ny fiainana mahantra dia ampiasain'ny mpanao politika noho ny fitiavan-tenany. Ampy ny karama 'ny lohan' ny firenena, ny zava-misy dia be kokoa noho ny mamelona ny fianakaviana, fa mbola izy no diso ny asa ataony.
Vao haingana izay nilaza fa rising ny toe-karena ny firenena, nefa na dia iray aza tsy nahatsapa izany.
Mbola mila tsipika, ka mihazona fotsiny ny fividianana ny NFA Vary, mbola ambony noho ny fiampangana momba ny solika, ny herinaratra ary saika ny rehetra ny entana, tsy mendrika ny karamany ny mpiasa ihany. Noho ny fitondran-tena ny mpanao politika, ny olom-pirenena tsotra fiantraikany, satria aleony izy ibulsa ny lehibe vola pangkahirapan noho ny manampy ny fidiram-bola ny mpiasa, ny fahadisoana goavana eo amin'ny faritry ny lohany. Ny antony fahatelo dia ny maha-tsy ny etazonia, na ny tsy fisian'ny fanamafisana. Raha izany dia ho tompon'andraikitra ihany ny ray aman-dreny ny ankizy eny an-dalambe dia azo inoana fa tsy misy fanafahana daty manjaka fa ny tanora ankehitriny arabe, tsy misy uhuging ny ankizy izay mangataka mba homena fiantrana, ary tsy misy mahonena miatrika ny zaza noana isika mahita. Tsy mampihatra ny Fanavaozana ara-pambolena fandaharana tsy tanteraka izay napetraky ny governemanta. Ny antony hoe ny zon'ireo tompon'ny lehibe tany toeram-pambolena dia ny format manan-tompo ny fananana ny matanjaka eo amin'ny fiaraha-monina sy ny governemanta. Misy ihany koa ny ny mahafaty ny fanoloana raha tsy misy tany fambolena mba hahazoana ny orinasa, toeram-ponenana sy ny taranja golf ny manan-karena.
Izay naagawan ny saham-na toeram-pambolena ny tantsaha. Ny antony, rehefa tsy ny fototra ao an-toerana sakafo Antony manafatra fototra kokoa ny sakafo toy ny vary amin'ny firenena hafa.
Antony iray hafa ny olana eto amin'ny firenena dia ny tafahoatra kapapabayaan ny harena voajanahary ao amin'ny firenena. Ny fanapahana ny hazo hahatonga ny safo-drano (fitrandrahana ala tsy ara-dalàna), ny fihotsahan'ny tany sy ny riaka. Ny aretim-pivalanana amin'ny renirano sy ny ranomasina, misy poizina, patutok sy diso lalana ny jono izay mandrava ny zava-mahagaga - dranomasina. Ny tsy firaharahiana ny governemanta sy ny olom-pirenena eo amin'ny harena voajanahary lehibe antony tsikelikely hanitrika ny firenena hilentika ao ny rehefa ny fahantrana. Ny ankizy izay mandany fotoana be dia be ny miasa eny an-dalana, dia mora kokoa ny aretina taovam-pisefoana, pnemonia sy ny aretina hafa, ary hiatrika ny avo mety ho ratra na ny fahafatesana avy maotera fiara. Izy ireo dia afaka ny ho ampiasaina ho toy ny fitaovana amin'ny zava-mahadomelina efaha, robberies, swindling sy ny an-keriny. Izy ireo dia afaka ny ho ampiasaina ho toy ny fitaovana ny zava-mahadomelina efaha, robberies, swindling sy ny an-keriny.
Ny sasany dia voatery ho zanaky ny sata na ny hafa ny heloka bevava.
Ny sasany dia voatery ho zanaky ny fivarotan-tena na hafa heloka bevava. Ankizy eny an-dalambe matetika miatrika ny olana amin'ny fahazoana ny fanabeazana ary Namela an-dalambe noho ireto antony manaraka ireto: ara-dalàna na ny ambany, na ny fianakaviany fidiram-bola dia tsy afaka manarona ny cost ny sekoly fisoratana anarana, fanamiana sy amin'ireo tetikasan-tsekoly, ary raha vao nisoratra anarana any an-tsekoly, ny ambony arakaraka ny ireo ankizy ireo dia voatery indray mitete avy, indrindra fa ny am-pianarana ny fandaniana hitsangana amin'ny taona tatỳ aoriana.
raha vao nisoratra anarana any an-tsekoly, ny ambony arakaraka ny ankizy dia voatery indray mitete avy, indrindra fa ny am-pianarana ny fandaniana hitsangana amin'ny taona tatỳ aoriana.
Ny filoha voafidy ny Filipina Benigno 'Noynoy' Aquino dia nandresy tamin'ny fifidianana ny ady, fa ny tena ady dia mbola miady izy rehefa maka ny toerana ho toy ny mpitondra ny firenena, hoy ny mpandalina ara-politika. Izy no nametraka ny handova ny firenena izay niely patrana amin'ny fahantrana, ny miaramila, ny rotaka, ny kolikoly, herisetra-heloka, Silamo insurgencies sy ny adihevitra politika, ny milaza ny maro amin ireo izay manaraka ao amin'ny fanairana ny vahoaka Filipino. Izy no nampanantena nandritra ny fampielezan-kevitra fa handeha mba hampitsahatra ny kolikoly ao amin'ny governemanta ary vokatr'izany dia koa intsony ny fahasahiranana.
Ahoana no mba hahazo ny zom-pirenena ao Tiorkia - Fianarana any Eoropa andrefana
Дар асл. маълумотномаҳои аз ҷониби Русия ва Филиппинами бастаи созишномаҳо